Nchegharị - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Nchegharị
Nkwusa nke nchegharị
Ozizi mbụ nke Kraịst bụ ntọala nke nchegharị site n’ọrụ nwụrụ anwụ na nke okwukwe n’ebe Chineke nọ. ( Ndị Hibru 6:1 ) Jọn, nwa Zekaraya na onye bu ụzọ Kraịst, kpọsara baptizim nke nchegharị. (Luk 3:3) Jizọs bịara na-ekwusa ozi ọma Chineke na-asị, “Oge ahụ eruwo, alaeze Chineke dịkwa nso, chegharịanụ, kwerekwa n’Oziọma ahụ.” ( Mak 1:15 ) O zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma Alaeze Chineke na ikwusa ka mmadụ niile chegharịa. ( Luk 9:1-2 ) Mgbe e bulikwara ya elu n’aka nri Chineke, Ndịozi kpọsara otu Oziọma ahụ, sị: “Chegharịanụ, meekwa unu baptizim, unu niile n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu. unu ga-anata onyinye nke Mmụọ Nsọ.” ( Ọrụ 2:38 ) Nye ndị Jentaịl nakwa ndị Juu, Chineke enyewo nchegharị nke na-eduba ná ndụ. ( Ọrụ 11:18 ) N’ihi na n’aha Jizọs, a na-ekwusara mba niile nchegharị na mgbaghara mmehie, malite na Jeruselem. ( Luk 24:47 ) Obiọma Chineke bu n’obi iduga anyị ná nchegharị. ( Ndị Rom 2:4 ) Onyenwe anyị na-enwere anyị ndidi, n’achọghị ka onye ọ bụla laa n’iyi, kama ka mmadụ nile chegharịa. (2 Pita 3:9) Ma ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi, a ga-ekpughekwa ụwa na ọrụ ndị a na-arụ n’elu ya. (2 Pita 3:10) E debeere eluigwe na ụwa ndị dị ugbu a ka ọ bụrụ ọkụ, bụ́ ndị e debere ya ruo ụbọchị ikpe na mbibi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. (2 Pita 3:7)
Chineke ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume
Chineke nyere mmadụ niile iwu n’ebe niile ka ha chegharịa n’ihi na o dopụtala otu ụbọchị nke Ọ ga-ekpe ụwa ikpe n’ezi omume site n’aka otu onye ọ họpụtaworo, ma nke a ka o mesiri mmadụ niile obi ike site n’ime ka o si ná ndị nwụrụ anwụ bilie. ( Ọrụ 17:30-31 ) Ọ gwụla ma anyị chegharịrị, n’agbanyeghị otú mmehie anyị siruru n’ike, anyị ga-esokwa ndị ajọ omume laa n’iyi. ( Luk 13:5 ) Iji gbanarị ọnụma na-abịa, anyị aghaghị ịmị mkpụrụ n’ikwekọ ná nchegharị. ( Luk 3:7-8 ) Ọbụna ugbu a, a tọgbọrọ anyụike na mgbọrọgwụ osisi. Ya mere, anēb͕utu osisi ọ bula nke nāmighi nkpuru ọma, tubà kwa n'ọku. ( Luk 3:9 ) Jizọs bụ onye ji mmụọ nsọ na-eme baptizim na ọkụ. Ọ nējide ndu-ọdu-ọka iji kpochapu ebe-nzọcha-ọka-ya, na ichikọba ọka n'ọba-ya: ma igbogbo ọka ọ ga-eji ọkụ na-adịghị emenyụ emenyụ rechapụ. ( Luk 3:16-17 ) Ndị obi tara mmiri na ndị na-enweghị nchegharị na-akpakọbara onwe ha ọnụma n’ụbọchị ọnụma mgbe a ga-ekpughe ikpe ezi omume nke Chineke. ( Ndị Rom 2:5 ) Ọ ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị; ndi were ntachi-obi n'ime ezi ihe nāchọ otuto na nsọpuru na anwugh anwu, Ọ gēnye ndu ebighi-ebi; ma ndị na-ese okwu ma na-adịghị erube isi n'eziokwu, ma ajọ omume, a ga-enwe ọnụma na ọnụma. (Ndị Rom 2:7-8)
Nchegharị bụ ọnwụ mmehie
Nke ị na-agha adịghị adị ndụ ma ọ bụrụ na ọ nwụọ. (1 Ndị Kọrint 15:36) Na nchegharị anyị na-ewere onwe anyị dị ka ndị nwụrụ anwụ ná mmehie ma dị ndụ n’ebe Chineke nọ n’ime Kraịst Jisọs. ( Ndị Rom 6:10 ) N’ihi na anyị niile bụ́ ndị soro Kraịst nwụnahụrụ, e meekwa anyị baptizim n’aha Jizọs, a na-eme anyị baptizim baa n’ọnwụ ya. (Ndị Rom 6:3) Ya mere e liri anyị na ya site na baptizim baa n'ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si ná ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna anyị, anyị onwe anyị kwa wee na-ejegharị n'ọhụụ nke ndụ. ( Ndị Rom 6:4 ) Ugbu a, ọ bụrụ na anyị na Kraịst anwụọla, anyị kwere na anyị na ya ga-adịkwa ndụ. ( Ndị Rom 6:8 ) N’ihi ya, anyị ekwesịghị ikwe ka mmehie chịrị n’ahụ́ anyị nke nwere ike ịnwụ anwụ. ( Ndị Rom 6:12 ) Anyị ekwesịghịkwa iche onwe anyị n’ihu mmehie dị ka ngwá ọrụ ajọ omume, kama n’ihu Chineke dị ka ndị e nyere nyere nyere nyere nyere nyere nyere nyere nyere የተ የተ የተ g d` ná nà ayi onwe-ayi. (Ndị Rom 6:13)
Na -ejegharị n'ìhè
Chineke bụ ìhè, ọchịchịrị adịghịkwa n'ime ya ma ọlị. (1 Jọn 1:5) Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya na-akpakọrịta ka anyị na-eje ije n’ọchịchịrị, anyị na-agha ụgha, anyị adịghịkwa eme eziokwu ahụ. (1 Jọn 1:6) Ọ bụrụ na anyị na-eje ije n’ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n’ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, ọbara Jizọs na-asachapụkwa anyị ná mmehie niile. (1 Jọn 1:7) Anyị bụ ohu nke onye ahụ anyị na-erubere isi, ma ọ́ bụghị nke mmehie, nke na-eduba ná ọnwụ, ma ọ bụ nke nrubeisi, nke na-eduba n'ezi omume. ( Ndị Rom 6:16 ) Ma ekele dịrị Chineke, n’ihi na ndị bụbu ndị ohu nke mmehie ugbu a erubeghị isi n’obi ha ruo n’ụkpụrụ ozizi e nyefere ha, (Ndị Rom 6:17) nakwa, ebe a tọhapụworo ha n’ohu. site ná mmehie, aghọwo ndị ohu ezi omume. ( Ndị Rom 6:18 ) Dị ka ndị ohu Chineke, mkpụrụ nke anyị na-enweta na-eduga ná ido nsọ na ọgwụgwụ ya, ndụ ebighị ebi. (Ndị Rom 6:22)
Bụrụnụ ndị nwụrụ anwụ maka mmehie ma dị ndụ na Mmụọ
Chineke na-enye ndị na-erubere ya isi mmụọ nsọ. ( Ọrụ 5:32 ) Site n’ikwere, e ji Mmụọ Nsọ ahụ e kwere ná nkwa mechie anyị, bụ́ nkwa nke ihe nketa anyị ga-eji ruo mgbe anyị ga-enweta ya. (Ndị Efesọs 1:13-14) Kraịst emezuwo nkwa ahụ, sị, 'Jọn ji mmiri mee unu baptizim, ma a ga-eji Mmụọ Nsọ mee unu baptizim.' ( Ọrụ 11:16 ) Ọ bụ ya na-eji mmụọ nsọ na ọkụ eme baptizim. ( Luk 3:16 ) N’ezie, mmụọ nsọ anyị na-anata bụ nkwupụta nke ịbụ ụmụ Chineke, onye anyị na-etiku “Aba! Nna!” ( Ndị Rom 8:15 ) N’ihi na ọ bụrụ na Kraịst nọ n’ime unu, ọ bụ ezie na ahụ́ ahụ nwụrụ anwụ n’ihi mmehie, mmụọ nsọ bụ ndụ n’ihi ezi omume. ( Ndị Rom 8:10 ) A sachara anyị, edoro anyị nsọ, na-agụ anyị n’onye ezi omume n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na site n’ike mmụọ nsọ nke Chineke anyị. (1 Ndị Kọrint 6:11) Ọ gwụla ma mmadụ a mụkwara ọzọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke anya. ( Jọn 3:3 ) Ọ bụ mmụọ nsọ na-enye ndụ. ( Jọn 6:63 ) Ọ gwụla ma a mụghị mmadụ site na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịbanye n’alaeze Chineke. (Jọn 3:5) Ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n’ime mmụọ na n’eziokwu. (Jọn 4:24)
Irube isi ruo ọgwụgwụ
Na ido-nsọ nke Mmụọ Nsọ, Chineke zubere ka anyị na-erubere Jizọs Kraịst isi na maka ifesa ọbara ya. (1 Pita 1:2) Anyị ga-asachapụ onwe anyị mmerụ ọ bụla nke anụ ahụ na nke mmụọ, na-eme ka ịdị nsọ zuo oke n’egwu Chineke, jiri egwu na ịma jijiji na-arụpụta nzọpụta nke onwe anyị. (2 Ndị Kọrint 7:1) Dị ka ụmụ ọhụrụ a mụrụ ọhụrụ, anyị kwesịrị itolite gaa ná nzọpụta na-achụso ezi omume, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ịhụnanya, iguzosi ike n’ihe, ịdị nwayọọ n’ịlụ ezi ọgụ nke okwukwe ahụ na ijide ndụ ebighị ebi ahụ e kpọrọ anyị òkù ịbịa. (1 Timoti 6:11-12) Anyị ekwesịghị ịdị umengwụ, kama anyị na-eṅomi ndị sitere n'okwukwe na ndidi keta nkwa ndị ahụ. ( Ndị Hibru 6:12 ) Ṅaa ntị òkù maka ntachi obi nke ndị nsọ, ndị na-edebe iwu Chineke na okwukwe ha na Jizọs. ( Mkpughe 14:12 ) N’ihi na anyị na-ekere òkè na Kraịst, ma ọ bụrụ n’ezie, anyị jisie obi ike mbụ anyị ike ruo ọgwụgwụ. ( Ndị Hibru 3:14 ) A ga-akpọ ọtụtụ ndị asị n’ihi aha ya, ma a ga-azọpụta onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ. (Mak 13:13)
Nọgidenụ na nchegharị
Jizọs mụtara nrubeisi site n'ahụhụ ọ tara. ( Ndị Hibru 5:8 ) Ebe e mekwara ya ka o zuo okè, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighị ebi nye ndị nile na-erubere ya isi. ( Ndị Hibru 5:9 ) Onye ọ bụla nke kwere n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; Onye ọ bụla nke na-adịghị ege Ọkpara ya ntị agaghị ahụ ndụ, ma ọnụma Chineke na-adịgide n'ahụ ya. ( Jọn 3:36 ) N’ọkụ na-ere ere, a ga-abọ ọbọ n’ahụ́ ndị na-amaghị Chineke na ndị na-adịghị erube isi n’ozi ọma nke Onyenwe anyị Jizọs. (2 Ndị Tesalonaịka 1:8) A na-agụ mmadụ n’onye ezi omume site n’ọrụ, ọ bụghịkwa nanị site n’okwukwe. ( Jems 2:24 ) Okwukwe n’onwe ya, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, nwụrụ anwụ. ( Jems 2:17 ) Dị ka ahụ́ nke na-abụghị mmụọ si bụrụ ihe nwụrụ anwụ, otú ahụkwa ka okwukwe nke na-abụghị ọrụ nwụrụ anwụ. ( Jems 2:26 ) Ọ bụrụ na anyị agbahapụwo ịhụnanya anyị nwere na mbụ, Jizọs ga-abịa wepụ ọnọdụ anyị, ọ gwụla ma anyị chegharịrị. ( Mkpughe 2:5 ) Ọtụtụ ndị na-ekpo ọkụ, ha adịghịkwa ọkụ ma ọ bụ oyi, n’ihi ya, ọ ga-agbụpụ ha ọnụ mmiri n’ọnụ ya. ( Mkpughe 3:16 ) Ha na-asị, “Aba m ọgaranya, enwewo m ihe ịga nke ọma, ọ dịghịkwa ihe m chọrọ, n’amaghị na ha bụ ndị nọ n’ahụhụ, ndị nwere ọmịiko, ndị ogbenye, ndị ìsì, na ndị gba ọtọ. Na-anụ ọkụ n'obi ma chegharịa. ( Mkpughe 3:17-19 )
Mkpụrụ nke ndị ajọ omume na mkpụrụ nke mmụọ nsọ
Ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke. Unu ekwela ka eduhie unu: ma ndi nākwa iko, ma-ọbu ndi-ekpere-arusi, ma-ọbu ndi nākwa iko, ma-ọbu ndi-ori, ma-ọbu ndi-anya-uku, ma-ọbu ndi-ọṅuṅu-manya, ma-ọbu ndi-nkwulu, ma-ọbu ndi-nghọb͕o, agaghi-eketa ala-eze Chineke. (1 Ndị Kọrint 6:9-10) Ọrụ nke anụ ahụ́ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, ndọrọ ndọrọ, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịṅụbiga mmanya ókè, oké oriri. na ihe ndị dị ka ndị a. Ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ agaghị eketa alaeze Chineke. ( Ndị Galeshia 5:19-21 ) Ka ihe ruru unyi ma ọ bụ okwu nzuzu ghara ịdị ma ọ bụ njakịrị rụrụ arụ, kama ka e nwee ekele. ( Ndị Efesọs 5:4 ) N’ihi na unu pụrụ ijide n’aka na onye ọ bụla nke na-akwa iko ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha, ma ọ bụ onye anyaukwu, enweghị ihe nketa n’alaeze. ( Ndị Efesọs 5:5 ) Ka onye ọ bụla ghara iji okwu efu duhie unu, n’ihi na n’ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi. ( Ndị Efesọs 5:6 ) Ya mere, gị na ha adịla ná mma; n'ihi na n'otù mb͕e unu bu ọchichiri, ma ub͕u a unu bu ìhè nime Onye-nwe-ayi, nējeghari dika umu nke ìhè. ( Ndị Efesọs 5:7-8 ) Ekerela òkè n’ọrụ ọchịchịrị ndị na-adịghị amị mkpụrụ, kama kpughee ha. (Ndị Efesọs 5:11) Site na nke a ka ọ pụtara ìhè ndị bụ ụmụ Chineke, na ndị bụ ụmụ ekwensu: onye ọ bụla na-adịghị eme ezi omume esiteghị na Chineke, ma ọ bụ onye na-adịghị ahụ nwanna ya n’anya. (1 Jọn 3:10) Ọ bụrụ na anyị dị ndụ site na Mmụọ Nsọ, ka anyị na-ejekwa ije site na Mmụọ Nsọ. ( Ndị Galeshia 5:25 ) Mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ. ( Ndị Galeshia 5:22-23 )
E nyere anyị iwu ịhụ n'anya
Ọ dịghị iwu ọzọ dị ukwuu karịa ndị a: 'Ị ga-eji obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nke abụọ bụ nka: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. ( Mak 12:30-31 ) N’ezie, anyị kwesịrị ịhụ ndị iro anyị n’anya ma na-emere ndị kpọrọ anyị asị ihe ọma, ụgwọ ọrụ anyị ga-adịkwa ukwuu, anyị ga-abụkwa ụmụ nke Onye Kasị Elu. ( Luk 6:35 ) Unu ewerela onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụ ibe unu n’anya, n’ihi na onye hụrụ ibe ya n’anya emezuwo iwu ahụ n’ihi na e mezuru iwu ahụ dum n’otu okwu: “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.” ( Ndị Rom 13:8-9 ) Onye na-adịghị ahụ n’anya amaghị Chineke, n’ihi na Chineke bụ ịhụnanya. (1 Jọn 4:8) Ọ bụrụ na anyị na-ahụrịta ibe anyị n’anya, Chineke na-anọgide n’ime anyị, e mewokwa ka ịhụnanya ya zuo okè n’ime anyị. ( 1 Jọn 4:12 ) Nke a bụ iwu ya, ka anyị kwere n’aha Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst nakwa ka anyị hụrịta ibe anyị n’anya. (1 Jọn 3:23) Ebumnuche nke ọrụ anyị bụ ịhụnanya nke si n’obi dị ọcha na ezi akọ na uche na ezi okwukwe na-apụta. (1 Timoti 1:5) Anyị maara na anyị esiwo n'ọnwụ gafee ná ndụ, n'ihi na anyị hụrụ n'anya. Onye na-adịghị ahụ n'anya na-anọgide n'ọnwụ. (1 Jọn 3:14)
Yipụ onwe ochie, yikwasịkwa nke ọhụrụ
Anyị agakwaghị ije ije dị ka ndị na-ejegharị n’ihe efu nke uche ha ma bụrụ ndị gbara ọchịchịrị na nghọta ha, ndị e kewapụrụ na ndụ nke Chineke n’ihi amaghị ihe dị n’ime ha, n’ihi isi-ike nke obi ha. (Ndị Efesọs 4:17-18) Ha aghọwo ndị na-adịghị eme ihe ma nyefee onwe ha ime ụdị adịghị ọcha ọ bụla. ( Ndị Efesọs 4:19 ) Ma nke ahụ abụghị ụzọ Kraịst n’ezie!— ( Ndị Efesọs 4:20 ) N’ịbụ ndị na-eche na ị nụwo banyere ya, bụrụkwa ndị e kụziri gị n’ime ya (Ndị Efesọs 4:21) bụ nke ụzọ ndụ unu, e mekwara ka e mebie site n’ọchịchọ aghụghọ, (Ndị Efesọs 4:22) ka e meekwa ka e mee ka unu dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu, (Ndị Efesọs 4:23) na iyikwasị onwe unu ọhụrụ, nke e kere n’oyiyi nke mmụọ nsọ. Chineke n'ezi omume na ịdị nsọ. ( Ndị Efesọs 4:24 ) Dị ka mkpughe nke ihe omimi ahụ nke e zoro ezo ruo ogologo oge si dị (Ndị Rom 16:25) ma e mewo ka ọ pụta ìhè ugbu a ma mee ka mba nile mara; iwu nke Chineke anyị ebighebi ka o weta nrube-isi nke okwukwe. ( Ndị Rom 16:26 ) Jizọs bịara imeghe anya anyị, ka anyị wee si n’ọchịchịrị gaa n’ìhè nakwa n’ike Setan gaa n’ebe Chineke nọ, ka anyị wee nweta mgbaghara mmehie na ọkwá n’etiti ndị e doro nsọ site n’okwukwe na ya. . ( Ọrụ 26:18 ) N’ihi na e sitere n’amara zọpụta anyị site n’okwukwe. Ma nka bughi nke ayi nēme; ọ bụ onyinye Chineke. ( Ndị Efesọs 2:8 ) N’ihi ya, ebe e buru okwukwe kpọọ anyị ndị ezi omume, anyị na Chineke dị n’udo site n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. (Ndị Rom 5:1) Anyị esiwokwa n’aka ya nweta ohere site n’okwukwe baa n’amara a nke anyị guzoro n’ime ya, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n’olileanya nke ebube Chineke. ( Ndị Rom 5:2 ) N’ime Kraịst Jizọs, anyị bụ ụmụ Chineke, site n’okwukwe. ( Ndị Galeshia 3:26 ) N’okwukwe, anyị na-eji ịnụ ọkụ n’obi na-echere olileanya ezi omume. (Ndị Galeshia 5:5) Ọ dịghị ihe ọ bụla bara uru n'ime Kraịst Jizọs, kama ọ bụ naanị okwukwe na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya. ( Ndị Galeshia 5:6 )
Ezi omume site n'okwukwe
Ndụ mmadụ abụghị n'ụba nke ihe onwunwe ya. ( Luk 12:15 ) A na-ekpughe ezi omume nke Chineke site n’okwukwe maka okwukwe, dị ka e dere, sị: “Onye ezi omume ga-esi n’okwukwe dị ndụ.” ( Ndị Rom 1:17 ) Ezi omume nke Chineke bụ site n’okwukwe na Jisọs Kraịst maka ndị nile kwere ekwe. ( Ndị Rom 3:22 ) N’ihi na ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ ma e wezụga okwukwe dị ka e si na-ekwu, “ma onye ezi omume m ga-adị ndụ site n’okwukwe, ọ bụrụkwa na ọ laa azụ, ihe ya adịghị mkpụrụ obi m ụtọ.” ( Ndị Hibru 10:38 ) A na-ebibi ndị na-ala azụ, ma ndị nwere okwukwe na-echebe mkpụrụ obi ha. ( Ndị Hibru 10:39 ) Site n’ịjụ ezi akọ na uche, ụfọdụ emebiwo okwukwe ha (1 Timoti 1:19) n’ihi ya kwa na-eweta ikpe ọmụma n’ihi ịgbahapụ okwukwe mbụ ha. ( 1 Timoti 5:12 ) Ọtụtụ ndị na-anụ ozi ọma ahụ, ma ọ gwụla ma e ji okwukwe jikọta ozi ahụ na ndị na-ege ntị, ọ baghị uru. ( Ndị Hibru 4:2 ) Ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute Kraịst ma ghara ịkpọ nna ya na nne ya na nwunye ya na ụmụ ya na ụmụnne ya ndị nwanyị asị, ọbụna ndụ nke ya, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ ya. ( Luk 14:26 ) Onye ọ bụla nke na-adịghị ajụ ihe nile o nwere apụghị ịbụ onye na-eso ụzọ ya. ( Luk 14:33 ) Onye ọ bụla nke na-achọ ichebe ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya ga-azọpụta ya. (Luk 17:33)
Chegharịa ma tụgharịa ọzọ
Ebe e buliri Jizọs elu n’aka nri Chineke ma natakwa n’aka Nna nkwa nke mmụọ nsọ (Ọrụ 2:33), e nyere anyị iwu, “Chegharịanụ ka e meekwa unu niile baptizim n’aha Jizọs. Kraịst maka mgbaghara nke mmehie gị, ị ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.” ( Ọrụ 2:38 ) Nkwa ahụ dịịrị ndị niile nọ n’ebe dị anya, onye ọ bụla Onyenwe anyị bụ́ Chineke anyị kpọrọ n’ebe ọ nọ. ( Ọrụ 2:39 ) Ya mere, chegharịanụ, chigharịakwa, ka e wee hichapụ mmehie unu, (Ọrụ 3:19) ka oge ume ike wee si n’ihu Onyenwe anyị bịa, ka o wee zite Kraịst ahụ a họpụtara maka unu. , Jizọs, (Ọrụ 3:20) Onye eluigwe na-aghaghị ịnata ruo oge iweghachi ihe nile nke Chineke kwuru banyere ya site n’ọnụ ndị amụma Ya dị nsọ ogologo oge gara aga. (Ọrụ 3:21)